DEG DEG:-Guddoomiye Gobol iyo Saraakiil Ciidan oo Goordhow la Qarxiyey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararka aan ka heleyno Gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxaa sheegayaan in goordhow deegaan ka tirsan Gobolkaas qarax xoogan lagula eegtay kolonyo uu la socday Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose iyo Saraakiil Ciidan.
Qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa kolonyada uu la socday Guddoomiye C/qaadir Maxamed Nuur Siidii lagula eegtay inta u dhexeeysa degmada Afoogye iyo Wanla-weyn gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo tixsiile.
Dad ayaa sidoo kale sheegay in qaraxaas uu ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabo qarxa oo dhex galay kolonyada Guddoomiye Siidii oo uu la socday Taliyaha Ciidanka DANAB ee xoogga dalka, Saraakiil iyo xubno kale, iygaoo ka baxay degmada Afgooye.
Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay qaraxaas oo soo gaaray Mas’uuliyiin iyo Saraakiil Ciidan, waxaana warar la helayo ay sheegayaan in dagaalka xoogan oo u dheexeeya Ciidanka dowladda iyo Al-shabaab uu socdo.
Warar hordhac ah oo la helayo ayaa sheegaya in Taliyaha Ciidanka DANAB uu dhaawac soo gaaray iyo Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana waxaa diyaarad nooca helicopter-ka ah dhaawacyada lagu geeyay Afgooye.
Weli ma jiro wax war ah o kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka dowladda Federaalka oo ku aadan weerarkaas ka dhacay Gobolka Shabeellaha Hoose oo ahaa mid dhabbo ah, waxaana Guddoomiyaha Gobolka iyo Saraakiisha Ciidan ay kusii jeedeen Wanla-weyn.